Microsoft SONIC haisi kugoverwa kweLinux | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft SONIC haisi kugoverwa kweLinux
Zvakawanda zvinotaurwa nezve rudo rweMicrosoft rweLinux, kana kungofungidzirwa rudo. Ichokwadi ndechekuti Microsoft inobatikana kwazvo muLinux nyika, kupfuura zvayakamboita, uye ruvengo rwavo rwakadzikama kuti vhure pfungwa dzavo, uye kwete pfungwa dzavo chete, asiwo kodhi yavo, sezvo Microsoft yakaburitsa mapurojekiti akakosha senge akavhurika sosi, kunze kwekugadzira zvimwe zvirongwa zveGNU / Linux.
Ndinoomerera, kuti rudo rurege kuve rwakadai, uye zvese zvakaputika apo vezvenhau vakazivisa kuti Microsoft yagadzira yega kugoverwa kweLinux, Ndiri kutaura nezve chirongwa cheSONIC, inoshanda sisitimu yemagetsi iyo kambani yeRedmond yakagadzirwa gore rapfuura. Asi kana chirongwa ichi chikanyatsoongororwa, tinogona kufunga kuti SONIC haisi yekuparadzirwa kweLinux, kunyangwe zvinofungwa nevazhinji. Nekudaro, izvi hazvireve kuti rimwe zuva kuchave kana kuti Microsoft haishamise nemamwe mapurojekiti eLinux.
SONIC kana Vhura Network Mune Cloud Software Iyo inoshandiswa mumidziyo yenetiweki senge switch, asi ichokwadi here Linux distro iyo Microsoft yakagadzira? Mhinduro ndeyekuti, SONiC irinani application yeLinux, ndokuti, Microsoft inoshandisa Linux pane iyo inomhanya SONIC. SONIC saka seti yezvidimbu zvinoumba dambanemazwi rakazara uye iro rinopa hupenyu kune akawanda network network zvishandiso kubva kune akasiyana vagadziri.
Mhedziso, SONIC inoda Linux, asi haisi kugoverwa kweLinux. SONIC yakavhurwa sosi, asi haisi GNU Linux. SONIC seti yezvinhu zve software izvo zvinoda kugoverwa kweLinux (kunyanya zvinoshanda paDebian, pamwe ikozvino nyaya yakauya pamberi SONIC isati yatanga, uko Microsoft yaivepo pachiitiko cheDebian ikapa makosi ekudzidzira iyo) yekumhanyisa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Microsoft SONIC haisi kugoverwa kweLinux
Zvakanaka, pasi pasi ini ndichiri kufarira zano, pamwe zvakatonyanya kupfuura pakutanga, Microsoft kuvandudza paLinux pane kugadzira Linux. Ini handizive kana nuance ichioneka, ini pachokwadi ndinoifarira zvirinani, nekuti izvo zvinoreva kuti ivo vanogamuchira kuti Linux ndiyo solid base yekushandira nekuvaka.
Kunyanya nekuti Linux ingori kernel. Zvakafanana neApple, inoshandisa Linux asi haisi kugoverwa kweLinux.
Chinyorwa ichi chiri kure kure, hachisi nekuda kweruvengo rweMicrosoft ...
Tsanangura? Ini handifunge kudaro ... pane kudaro, iyi yemahara software uye Linux blog, dzimwe nguva tinotaura nezvezviridzi software makambani ezvinhu zvatisingade, asi nguva pfupi yapfuura nhau dzatinoita kubva kuMicrosoft dzakanaka chaizvo, chaizvo nekuda kwekuchinja kwepfungwa kwave kuri muMicrosoft.
Zvingave sekutaura kuti Ubuntu haisi Linux nekuti zvese zvavanoita kubata Debian, kuigadzirisa uye kuwedzera kunyorera
Kana ivo vakaunganidza iyo SONIC system iri Linux, ine ayo mashandisirwo, kunyangwe kana vachida mamwe
Kana izvo zvavanoita kuumbiridza chishandiso pamusoro peLinux yakanyorwa neimwe saka pamwe zvinogona kunzi SONIC haisi Linux.
Zororo pakuwana: tsvaga mafaera pane yako Linux distro
Vhura sosi bhizinesi software yeGNU / Linux masisitimu